January 26, 2021 10:23 (IST)
Former Zimbabwe captain Elton Chigumbura to retire from international cricket after T20 series against Pakistan
Harare: Former Zimbabwe captain Elton Chigumbura will retire from international cricket after the ongoing T20 series against Pakistan.
Pakistan Cricket Board shifts venues for ODIs, T20Is against Zimbabwe
Islamabad/UNI: The Pakistan Cricket Board has announced a revised itinerary for the upcoming white-ball series against Zimbabwe, which comprises of three one-day internationals and as many Twenty20 Internationals.
COVID-19: Zimbabwe-Afghanistan T20I series called off
Harare/UNI: Zimbabwe Cricket on Saturday called off their upcoming five-match T20I home series against Afghanistan, due to COVID-19 pandemic.
Dubai/IBNS: A One Day International (ODI) series between Zimbabwe and Australia, which was scheduled to be played in August, has been postponed due to the Covid-19 pandemic.
Virat Kohli and his men will not travel Sri Lanka, Zimbabwe amid COVID-19 pandemic: BCCI
Mumbai/IBNS: The Board of Control for Cricket in India (BCCI) on Friday announced that the Indian Cricket Team will not travel to Sri Lanka and Zimbabwe owing to the current threat of COVID-19.
Dhaka/IBNS: Cricketer Mushfiqur Rahim has been named in the Bangladesh squad which will play the lone Test against Zimbabwe starting on 22 February 2020 in Dhaka.
Dubai, May 11 (IBNS): Zimbabwe's ladies hit the ground running on their return to action at Old Hararian’s Sports Club on Thursday.
Dubai, Nov 10 (IBNS): England and Zimbabwe cricketers have surged in the latest MRF Tyres ICC Men’s Test Player Rankings, which were released on Saturday morning and incorporates player performances from the Galle and Sylhet Tests.
Dale Steyn, Imran Tahir return to South African squad for ODI series against Zimbabwe
Durban, Sept 14 (IBNS):The Cricket South Africa has named Warriors batsman Christiaan Jonker as a new cap in the Standard Bank Proteas squad for the three-match ODI Series against Zimbabwe which starts at the end of this month.
Fakhar Zaman shatters Vivian Richards' record, becomes fastest batsman to score 1000 in ODI
Bulawayo, July 22 (IBNS): Pakistan's opening batsman Fakhar Zaman grabbed attention once again on Sunday as he wrote his name in the record books during the ongoing fifth ODI match against Zimbabwe.
Aaron Finch sets new record during T20 I match against Zimbabwe
Harare, July 3 (IBNS): Australian cricketer Aaron Finch on Tuesday broke his own record to set new individual score in T20 International match against Zimbabwe on Tuesday.
Cricket Australia names Tim Paine, Aaron Finch as new captains for England and Zimbabwe tours
Melbourne, May 8 (IBNS): The Cricket Australia has named Tim Paine and Aaron Finch as the new skippers for the upcoming England and Zimbabwe tours respectively.